Video: Myanmar Celebrities' Night Show Variety Concert | Myanmar Celebrity Gossip & News
Video: Myanmar Celebrities' Night Show Variety Concert
This is the Video of Myanmar "Celebrities' Night Show" Variety Concert which was held on 18 March 2011 at Thuwanna Indoor Stadium, Thingyangyun, Yangon. Myanmar Popular Celebrities from both filming and Music Industries performed for this Variety Concert.
MattMarch 24, 2011 at 3:11 AMပရိတ်သတ်ကိုပဲ မိုက်ကြီးထိုးထိုးပေးတာကို ကြည့်မရတော့ဘူး။ သူ့တို့ဆိုတာကိုကြည့်ချင်လို့ ပိုက်ဆံပေးပြီး လာကြည့်ပါတယ်။ သူတို့က ရေသာခိုပြီး ပရိတ်သတ်ကို လာဆိုခိုင်းနေသေးတယ်။ReplyDeleteWinMarch 24, 2011 at 3:30 AMအမဲတုံးလေး ဖြူဖြူလေးကတော့ အလန်းဆုံးပါဘဲ့ReplyDeletemr.March 24, 2011 at 4:46 AMဘာပဲပြောပြော ဖြူဖြူကျော်သိန်း အလန်ဆုံးပဲ။ReplyDeleteTinMarch 24, 2011 at 6:49 AMBest performer ever Phyu Phyu Kyaw Thein !!ReplyDeletemMarch 24, 2011 at 6:52 AMဆိုခိုင်းတာက သိပ်ကိစ္စမရှိဘူး...စစချင်း ၀ိုင်းစုဆို ကြည့်ပါလား...တိုးသေးတယ်ဆိုပဲ....သူ့သီချင်းအေးအေးကို ဘယ်လိုများ ဆိုပေးရဦးမယ် မသိ.....ပရိတ်သတ်တကယ်ကြိုက်တယ် ဆိုချင်တယ်ဆိုရင် ပြောနေစရာကို မလိုပါဘူး...အလိုလိုကို လိုက်ဆိုကြတာ...ReplyDeleterichie421976March 24, 2011 at 5:56 PMမင်းတို့လဲဆိုချင်သလိုဆို ဒို့လဲကချင်သလိုက ပရိတ်သတ်ကလဲအော်ချင်သလိုအော်။ReplyDeletechitMarch 24, 2011 at 10:39 PMရန်အောင်ကအမြတ်ဆုံး ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပြီးတယောက်တွဲဆိုသွားတယ် ဖြူဖြူလေးရဲ့ဖင်ကိုကိုင်လိုက်ရတဲ့အကောင်တွေကရန်အောင်ထက်တော့သာ တယ်ReplyDeleteMyuwaiMarch 25, 2011 at 2:40 AMမြန်မာ့ celebrities ရှိုးပွဲကြည့်လိုက်မှပဲ ငယ်ငယ်တုန်းက ရပ်ကွက်ထဲမှာ ကာလီမာ မယ်တော် ဘုရားပွဲလှည့်တာကို သတိရမိတယ်... ... -_-ReplyDeleteHtet akarMarch 25, 2011 at 7:43 AMသောက်ကောင်မတွေ၇ွကိုရွတယ်အကုန်လုံးဟိုဒင်လုပ်ချင်တာ....................ReplyDeletechindMarch 25, 2011 at 1:41 PMဘာပဲပြောပြော ဖြူဖြူကျော်သိန်း အလန်ဆုံးပဲ။ReplyDeletethanzinMarch 25, 2011 at 5:28 PMPhyu Phyu you are amazing performer !!GOD bless you !ReplyDeleteMingMarch 25, 2011 at 10:57 PMYep, She was singing power full really great and she's amazing i love her wonderful style .ReplyDeleteOMarch 25, 2011 at 11:01 PMomg Melody lost her weightsReplyDeletechitlunlayMarch 26, 2011 at 6:00 AMအော်ဒို့ မြန်မာတွေ မြန်မာတွေ ဘယ်သူကအဆိုတော် မှန်း ဘယ်သူတွေကရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးတွေမှန်း မသိကြဘူးနော် .အားလုံးကတကယ့်စွယ်စုံ အနုပညာရှင်ကြီးတွေ ဘဲကိုးTV ကြော်ငြာသရုပ်ဆောင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် စာရေးဆရာ ၀တ်ထု ကဗျာ အေ ......ဘာညာ အကုန်ဗျာ အကုန် ဘဲဗျာ ဘာများကျန်သေးလဲ....ငပြောသီး အသံနဲ့ ဆိုနေရင်လည်း ကြိုက်တာဘဲ ..ခရမ်းသီးအသံတွေ နဲ့ ဆိုတဲ့ ဘာညာ show ပွဲအကုန် ကြည့်တာဘဲ .. အော်အေးပေါ့ ဒီလိုအားပေးတဲ့ ပရိပ်သာတ်တွေ ရှိနေသရွေ့ အားမနားတမ်းဆိုနေကြအုံးမှာဘဲလေ..... အော် ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ် စိပ်ညစ်ဖို့ ReplyDeleteayethetMarch 26, 2011 at 7:39 AMblueberry လားမသိဘူး ကလေးdancers တွေနဲ့ ကိုယ်ကပဲခေတ်နောက်ကျလို့လားမသိဘူး တမျိုးကြီးဖြစ်နေတကယ်ဒီအရွယ်နဲ့စာကိုဘယ်လိုလုပ်စိတ်ပါတော့မလဲReplyDeletewinmgmgMarch 26, 2011 at 1:47 PM"Lady Phyu Phyu" is the best.ReplyDeletenzmMarch 27, 2011 at 7:51 AMPhyu Phyu Kyaw Thein ROCKS!!! BRAVO!!!ReplyDeletetsuMarch 28, 2011 at 3:54 AMphyu kyaw thein voice is the best.. the rest i don't know what they are singing and how come they become singer.. ya da yar pae kaung lo lar ma thi bu.ReplyDeleteppktMarch 28, 2011 at 10:22 AMဖြူဖြူတစ်ယောက်သာမပါရင်..ပွဲပျက်ပြီReplyDeleteZion ZeonMarch 28, 2011 at 9:58 PMcopy copy copy copy copy copy တွေ စိတ်လေတယ် တူအောင်လဲ မတူနိုင်ဘူး...ဒါဟာ မြန်မာပြည်က ရှိုးပွဲဆိုတာပြောရမှာတောင်ရှက်တယ်...ဘူး...ReplyDeletemayleithiriMarch 29, 2011 at 9:01 AMLady Phyu Phyu koakyite sone pal hay!!!!ReplyDeletephilipMarch 29, 2011 at 10:38 AMအရင်တုန်းကတော့ တရုတ်သီချင်းတွေ ကော်ပီလုပ်ကြတယ် အခုတော့ တယား ထဲ ယားနေကြတဲ့ ကိုရီးယား သီချင်းတွေ ကို ကော်ပီလုပ်လာကြပါလား sighReplyDeleteRayMarch 29, 2011 at 2:49 PMOne of our burma like as Lady gaga is Ma PHYU , her performance is always fresh and creation ..ReplyDeletekkMarch 29, 2011 at 4:54 PM@ppkt nin pyaw ta man tal thu thar ma par yian hammmmReplyDeleteahMarch 30, 2011 at 11:18 PMဘာရီ မှန်းကို မသိဘူး...ReplyDeleteaung koMarch 31, 2011 at 6:44 AMမြန်မာပြည်က ဒီလို အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျလွန်းတဲ့ အက မျိုးတွေ ဘယ်တော့များမှ ရပ်ပြီး ပျောက်ကွယ်သွား မလဲ မသိဘူး ။ReplyDeleteoakerMarch 31, 2011 at 8:40 AMဖြူဖြူ ကို ကြည့်ရတာ တစ်ခုခုလိုနေReplyDeleteoakerMarch 31, 2011 at 8:46 AMရန်အောင် က နှာခေါင်း ကို ကြည့်ပါလားမီးတောက် နေတာ ....“ကြည့် တဲ့ သူမခံနိူင်ဘူးReplyDeleteAdd commentLoad more...